Ady mampiombona izao fa tsy mampisaraka… | NewsMada
Ady mampiombona izao fa tsy mampisaraka…
Inona marina ny mampitombo ny olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus amin’izao fotoana izao, indrindra ho an’ny faritra Analamanga manokana? Noho ny vanim-potoana ririnina mampahazo vahana ny tsimokaretina ho haingam-pitombo, hatanjaka, maharitra. Na noho ny fitomboan’ny olona atao fitiliana, na ny tsy fitandremana ny fepetra ara-pahasalamana…
Na ahoana na ahoana, tsy takona afenina ary tena mampatahotra ny fitomboan’ny isan’ny olona mitondra ny tsimokaretina. Miara-dalana ho azy amin’izany ny fitomboan’ny isan’ny marary ao anatin’ny fahasarotana, ny isan’ireo namoy ny ainy. Misy amin’izao trangan-javatra izao vao miaiky fa tena misy ny valanaretina Covid-19: tsy mifidy olona, tsy mitsitsy, mamono…
Amin’izany, ao ny izao vao taitra amin’ny torimasony na ny fitazan-davitra izay ela izay; mampika-peo ny amin’izay tokony hatao, mitsikera, manome tsiny aza. Fotoana fifanomezan-tsiny ve izao lalan-tsarotra sy mafy diavian’ny firenena izao? Eny, tsy isaritahana na hampikorontana an-toerana aza. Nahoana? Tsy mitsaha-manafika ny tena ny fahavalo hoe tsy hita maso.
Raha misy manafika ny tokantrano iray, tsy maintsy manambatra ny heriny ny iray trano na tsy mitovy hevitra sy miady toy inona aza. Manome vahana ho azy ny fahavalo ny ady an-trano, ny fikorontanana an-toerana… Sanatria, misy mahita tombontsoa amin’ny fihanaky ny valanaretina eto amin’ny firenena amin’izao? Misy ny tsy manao afa-tsy ny manome tsiny, mitsikera, manakivy aza.
Tsy vitan’ireo fatra-panohitra izay atao sy mitranga rehetra amin’izany na ny manentana ny manodidina ny amin’ny tokony hanaja ny fepetra hiarovan-tena sy hiarovana na hafa anatin’izao fahamehana izao aza, ohatra. Amin’izany, ahoana ny handresena ny fahavalo… iombonana? Ady mampiombona izao fa tsy mampisaraka, raha tena tiana ny handresy ny fahavalo.
Sao diso fahavalo ka izay mpiray trano na mpiray firenena hita maso no toherina sy iadiana? Nefa fahavalo tsy hita maso no hoe atrehina… Mila mandini-tena alohan’ny itenenana ny hafa?